ချစ်လိပ်ပြာ အချစ်စာပေ: မာနရှင်မလေးရဲ့အရှုံး
သူမနာမည်ကညိုညိုအောင်။ လှတယ်။ မာနကြီးတယ်။ ကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံး သူမကို အလှဆုံးလို့ ပြောကြတယ်။သူမ ကမျက်နှာလှသလို ကိုယ်လုံးကလည်းအရမ်းသည်။ အရပ်က ၅ ပေ ၆ ခန့် အသားက နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ညိုပြီးစိုနေတယ်။ သူမရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ အခုခတ်မိန်းကလေးတွေလို အတိုအပြတ် ဘောင်းဘီ လုံးဝမ၀တ်ခြင်းပင်။ အမြဲတမ်း မြန်မာဆန်ဆန်ထမီလေးနဲ့ နေလေ့ရှိသည်။ နောက်ရည်းစားလည်းမရှိသေး။ ယောက်ျားများနှင့်လည်း ကင်းကင်းနေလေ့ရှိသောကြောင့် မာနရှင်မလေးလို့လည်း နာမည်ကြီးသေးသည်။
ညိုညိုအောင်က ယောက်ျားတွေကို အထင်မကြီးသည်မှာအကြောင်းရှိသည်။ သူမငယ်စဉ် အပျိုဖြစ်ခါစ ၁၃ နှစ်လောက်တွင် ကျောင်းမှအစည်းအဝေးရှိသောကြောင့်အိမ်သို့ပြန်လာရာ
"အား အား ကိုကိုရေ တော်ပါတော့ ဒီမှာနာလှပြီ အဟင့်ဟင့်" ဟူသော တောင်းပန်သံများ
သူမ အစ်မ၏ အခန်းမှ ရုတ်တရက်ထွက်လာသောအသံကိုကြားမိလိုက်ရာ ညိုညိုအောင်သည် တံခါးလေးကိုအသာဟကာ အထဲကိုချောင်းကြည့်လိုက်ရာ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရလေသည်။
ကုတင်ပေါ်မှ ညိုညိုအောင်၏ အစ်မသည် ကိုယ်တုံးလုံနှင့်လှဲနေပြီး သူမတို့၏ ကားဒရိုင်ဘာ အောင်မောင်းက သူမအစ်မအပ်ါကိုတက်ခွပြီး ရှည်လျှားမည်းနက်နေသော လီးချောင်းကြီးနှင့်ထိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ညိုညိုအောင်၏ အစ်မမှာ ညိုညိုအောင်လို အသားအညိုပဲ အသားကဖြူဖွေးနေရာ အသားမည်းလှသောကိုအောင်မောင်းကြီးက မတန်မရာတက်လိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။ထိုမြင်ကွင်းကို မြင်နေရသောညိုညိုအောင်မှာ အော်ဖို့ပင်သတိမရမိတော့ပဲ ရင်တစ်ဖိုဖိုနှင့်သာ စောင့်ကြည့်မိသည်။ အောင်မောင်းကလည်း သူမ အစ်မကို အပ်ါကတက်လိုးလို့အားမရပဲ
" ဟဲ့ မီမီအောင် ဖင်ကုန်းစမ်း နင့်ကို အနောက်က နေခွေးလိုးလိုးမယ် "
အလွန်တရာရိုင်းစိုင်းလှစွာ ပြောပြီးလိုးလေသည်။ မီမီအောင်ကလည်း ပါးစပ်က
"တော်ပါတော့ရှင် တော်ပါတော့ရှင်" ဟု တစ်တွတ်တွတ်တောင်းပန်နေသော်လည်း ဖင်ကတော့ကုန်းပေးလိုက်သည်။ အောင်မောင်းကတော့ သူ့ရဲ့လီးမည်းမည်းနဲ့ အသားကုန်ဆောင့်လိုးလေသည်။ လီးနဲ့ အဖုတ်ထိသံ ကတစ်ဖတ်ဖတ်မြည်နေသလို မီမီအောင်ရဲ့ ပါးစပ်ကလည်းတစ် အီးအီး တစ်အင်းအင်းနှင့် ညည်းနေလေသည်။ ညိုညိုအောင်သည်ထိုမြင်ကွင်းကို ပြီးအောင်မကြည့်နိုင်တော့ ဘဲ သူမရဲ့ အခန်းထဲသို့ အမြန်ပြေးဝင်ပြီး စောင်နှင့်ခေါင်းမြီးခြုံပြီးနေလိုက်ပါတော့သည်။
နောက်တစ်နေ့ကျတော့ မီမီအောင်သည် အောင်မောင်းနောက်သို့လိုက်ပြေးသွားသည်။ သူမ အစ်မရဲ့ လုပ်ရက်ကို ညိုညိုအောင်လုံးဝနားမလည်ပေ။ ထိုနေ့က သူမမြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းသည် သူမအား ယောကျာ်းများကို မုန်းတီးစက်ဆုပ်စေခဲ့သည်။
ယောကျာ်းများကို မုန်းတီးသူ ညိုညိုအောင် ရဲ့ဘ၀မှာ သူမသဘောကျမိသော ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်တော့ရှိဖူးသည်။ ထိုသူမှာ သူမရဲ့ တိုက်ဘေးမှာနေသော ကျော်ကျော်ဖြစ်သည်။ ကျော်ကျော်သည် သူမတွေ့ဖူးသောယောကျာ်းလေးတွေနဲ့ မတူ။ ဖြူစဉ် ရိုးသားသောမျက်နှာထားရှိသည်။ အေးချမ်းသည်။ အသားအရည်ကယောကျာ်းတန်မဲ့အတော်ဖြူသည်။သူမသည် ကျော်ကျော်ကိုတော့ တစ်ခြားယောကျာ်းများနှင့်မတူ ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းသည်။
တစ်ရက် သူမ ညတစ်ရေးနိးလာရာ ပြန်အိပ်မရသောကြောင့် တစ်နေ့ကမှဝယ်လာတဲ့ မှန်ဘီလူးလေးနဲ့ လျှောက်ကြည့်ရာ အမှတ်မထင် ကျော်ကျော်အခန်းပြတင်းပေါက်ကို ကြည့်မိသောအခါ မြင်လိုက်ရသောမြင်ကွင်းက သူမအား ကြက်သေသေသွားစေသည်။
မီးမှိန်မှိန်လေး လင်းနေသော ပြတင်းပေါက်နားမှာ ကျော်ကျော်သည် အ၀တ်မရှိဘဲ မိန်းမအတွင်းခံ ဘောင်းဘီကို ရှုရင်း သူ့ရဲ့ လီးကြီးကို ရှေ့တိုးနောက်ငင်ပြုလုပ်ပြီး ဂွင်းထုနေခြင်းဖြစ်သည်။ အသားဖြူသလောက် လီးကြီးက မည်းလှသည်။ ဒစ်ကြီးက နီရဲနေပြီး အမွှေးများကလည်း သန်စွမ်းလှသည်။ ညိုညိုအောင်သည် ကျော်ကျော်၏လီးကို ကြည့်ရင်းနဲ့ ရွံရှာလာပြီး ကျော်ကျော် မျက်နှာအပ်ထားသော ဘောင်းဘီတိုကိုကြည့်မိရာ သူမ၏ ဘောင်းဘီတိုဖြစ်နေသည်ကို ထူးဆန်းစွာတွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ မှန်ဘီလူးနဲ့ကြည့်ခြင်းကြောင့် သူမ၏ ပျောက်သွားသောအတွင်းခံအားကောင်းကောင်းမှတ်မိလေသည်။
"ငါက ရိုးသားလှချည်ရဲ့လို့ထင်တဲ့အကောင်က ငါ့အတွင်းခံကိုခိုးပြီးရှုနေတာကိုး" ဟုတွေးပြီး ကျော်ကျော်ကို အလွန်တရာစက်စုပ်မိလေသည်။ သို့သော်လည်း ညိုညိုအောင် သည် ထိုမြင်ကွင်းကို မျက်နှာလွှဲဖယ်ခြင်းတော့မပြုမိချေ။ တအောင့်ကြာသော် ကျော်ကျော်၏ ကြီးမားလှသောလီးကြီးမှ ဖြူဖြူပျစ်ပျစ်အရည်များထွက်လာသည်ကို ညိုညိုအောင်သည် မှန်ဘီလူးမှ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လိုက်ရလေတော့သည်။ ထိုမြင်ကွင်းကိုမြင်ရသောအခါ ညိုညိုအောင်မှာပျို့ပင်ပျို့တက်လာပြီး မျက်နှာကို အမြန်လွှဲကာ မျက်စိဇွတ်အတင်းမှိတ်ပြီး အိပ်လိုက်ရတော့သည်။ မျက်စိကိုမှိတ်ထားသောလည်း ဒစ်နီကြီးကိုတော့ မြင်မြင်ယောင်မိခြင်းကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း မုန်းမိတော့သည်။
ကျော်ကျော်သည် ညိုညိုအောင်ဆိုသောမာနခဲလေးကို မြင်မြင်ချင်းအရမ်းချစ်မိသူဖြစ်သည်။ မာနကြီးမလေးက တစ်ခြားယောကျာ်းလေးများထက်မိမိ အား ပိုပြီး လိုက်လိုက်လျောလျောဆက်ဆံသောကြောင့် ပိုပြီးစွဲလမ်းနေမိသည်။ သူမ၏ ချိတ်ထမိန်အောက်မှ ကြီးမားတင်းကားနေသောဖင်ကြီးကိုလည်း အရမ်းကိုချစ်အရမ်းကိုလိုချင်နေခဲ့မိသည်။ထို့ကြောင့် သူမရဲ့ အတွင်းခံလေးကို မရရအောင်ခိုးပြီး ရတနာတစ်ပါးလိုတန်ဖိုးထားကာ ဂွင်းထုခဲ့ရသောညများမှာ တော်တော်များခဲ့ပြီ။ သူ အဲဒီလိုသူမရဲ့ ဘောင်းဘီတိုကို ရှူရင်း ဂွင်းထုနေသည်ကို သူမမြင်သွားခဲ့တာကိုတော့သူမသိခဲ့ချေ။ အစောပိုင်းရက်များတွင် ညိုညိုအောင်က သူ့ကို ချိုချိုသာသာ ဆက်ဆံသလောက်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ အနားပင်အကပ်မခံတော့ပေ။ သူ့ကိုမြင်တိုင်းလည်း သူမရဲ့မျက်နှာက တင်းမာခက်ထန်သွားလေ့ရှိသည်။ သူအရမ်းစိတ်ညစ်သွားသည်။.မာနမင်းသမီးလေး သူ့ကို ဘာများ စိတ်မခန့်မသင့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်။
စိတ်ညစ်ညစ်ဖြင့် အမျိုးများရှိရာ ပင်လယ်ရွာတစ်ရွာသို့ ကျော်ကျော်ခရီးထွက်ခဲ့သည်။ ကံကြမ္မာက တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ သင်္ဘောပေါ်မှာ ညိုညိုအောင်နဲ့တိုက်ဆိုင်စွာတွေ့လေသည်. ကျော်ကျော် လစ် ကနည်းပျော်သွားပြီး
"ညိုညိုရေ ဘယ်သွားမလို့လဲ သင်္ဘောပေါ်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လာဆုံတယ်နော်"
လူကြားထဲ အအော်ခံလိုက်ရသဖြင့် ကျော်ကျော်အတော်ရှက်သွားသည်။ နင်င့ါကိုဘာလို့ဒီလောက်တောင် တင်းမာနေရတာလဲကွာ။ အဲဒီညမှာ မိုးကလည်းနည်းနည်းရွာနေ အရက်ကလည်းထွေထွေနဲ့ ကျော်ကျော် သင်္ဘောကုန်းပတ်ပေါ်ကိုတက်လာတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကုန်းပတ်ပေါ်မှာ ညိုညိုအောင်က လည်းတစ်ယောက်တည်းတွေ့ပြန်တယ်။
"နင်ငါ့နောက်ဘာဖြစ်လို့လိုက်နေတာလဲ။ နင့်မျက်နှာကိုမမြင်ချင်ပါဘူးဆိုမှ နှာဘူးကောင်။"
ရုတ်တရက် ရင့်ရင့်သီးသီးအပြောခံလိုက်ရတော့ ကျော်ကျော်အရမ်းဒေါသထွက်သွားတယ်။ အရက်ကလည်းဝင်ထားတော့ သွေးကဆူနေပြီ အဲဒါနဲ့ မာနခဲလေးရင် လက်ကိုမပြောမဆိုနဲ့ ဆွဲကိုပြီးတော့ရင်ခွင်ထဲကို ဆွဲသွင်းလိုက်တယ်။ လက်တစ်ဖက်ကတော့ ညိုညိုအောင်ရဲ့ ဖင်ကြီးကို အားရပါးရဆုတ်နယ်ပလိုက်တယ်။
"ကျော်ကျော် နင်ဘာလုပ်တာလဲ။ အခုချက်ချင်းငါ့ကိုလွှတ်နော်။"
ညိုညိုအောင်ကလည်း အတင်းရုန်း ကျော်ကျော်ကလည်း ဇွတ်အတင်းဖက်ပြီးတော့ဖင်ကိုကိုင်နဲ့ နှစ်ယောက်စလုံးရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားတော့သည်။
ကျော်ကျော်သည် ကြိမ်းစပ်နေသော မျက်လုံးအစုံကို အားယူပြီးဖွင့်လိုက်သည်။ ရုတ်တရက်သူဘယ်ကိုရောက်နေလဲ သူမသိတော့ပေ။ လေးဘက်လေးတန်ကိုကြည့်လိုက်တော့လည်း ပင်လယ်ကြီးနှင့် ကျောက်ဆောင်များကိုသာတွေ့ရသည်။ သေသေချာချာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မှ သူနှင့် မာနရှင်မလေးတို့ ဆွဲလားရမ်းလားဖြစ်ပြီး ရေထဲသို့ပြုတ်ကျသွားကြောင်းသတိရလိုက်သည်။ ကျော်ကျော်သည် အဖြစ်အပျက်တို့ကို ပြန်သတိရသည်နှင့် ညိုညိုအောင်ကို စိတ်ပူသွားသည်။ နှစ်ယောက်စလုံးရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားသည် မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့်ကျော်ကျော်သည် အနီးအနားတ၀ိုက်သို့ ညိုညိုအောင်ကိုလိုက်ရှာသည်။
ကမ်းစပ်တစ်လျှောက် အနည်းငယ်မျှရှာပြီးသော် ကျောက်ဆောင်လေးတစ်နေရာတွင် တင်နေသော သူမကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ သူမကိုတွေ့လိုက်သည်နှင့် ကျော်ကျော်ကား အသက်ရှုရပ်မတံ့ဖြစ်သွားလေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မာနရှင်မလေး မှာ အောက်ပိုင်းတွင် ထမိန်မပါတော့ပဲ ဘောင်းဘီတို အဖြူလေးနှင့် မှောက်နေသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြန်မာဆန်လှသော မာနကြီးလှသော မိမိကိုယ်ကို အသားနည်းနည်းမှမပေါ်အောင်ဝတ်တတ်သော မာနရှင်မလေးညိုညိုအောင်မှာ ကျော်ကျော်၏ရှေ့တွင် အောက်ပိုင်းဗလာနှင့် သူမ၏ဖင်ညိုညိုကြီးကြီးကို ထောင်ပြီးမေ့နေသည်မဟုတ်ပါလား။
ကျော်ကျော်မှာ ထိုမြင်ကွင်းကြောင့် လီးတောင်လာလေသည်။သို့သော် သူ၏စိတ်ကို မနည်းထိန်းပြီး ညိုညိုအောင်ကို လှုပ်နှိုးလိုက်သည်။
" ညိုညို ညိုညို "
ကျော်ကျော်က သူမ၏နာမည်ကိုခေါ်ရင်းသူမအား ပက်လက်လှန်လိုက်သည်။ ညိုစိုပြီး သွယ်လျှသောပေါင်တံလေးက ကားသွားသည်။ သူမသည် အသက်တော့မှန်မှန်ရှူနေသေးသည်။ကျော်ကျော်က သူမရဲ့မျက်နှာနှာလှလှလေးကို ငေးကြည့်နေတုန်း။သူမမျက်လုံးတွေရုတ်တရက်ပွင့်လာလေသည်။
မျက်လုံးပွင့်ပွင့်ချင်း သူမသည်ကျော်ကျော်ကို တွေ့လိုက်သောအခါ လန့်သွားလေသည်။
" နင်နင် ဘာလုပ်တာလဲ"
သူမသည် ပြောပြောဆိုဆို မိမိ ရဲ့အောက်ပိုင်းကို သတိထားမိသောအခါ
သူမရဲ့အောက်ပိုင်းသည် အတွင်းခံလေးကလွဲပြီးဘာမှ မရှိတော့ပါလား။ အတွင်းခံလေးကလည်း သူမရဲ့ ကြီးထွားပြီးကားနေတဲ့ ဖင်ကို လုံအောင်မဖုံးဖိနိုင်ချေ။ ညိုညိုအောင်မှာတစ်စိမ်းယောကျာ်းလေးရှေ့မှာ ဒီလိုနေရတော့ရှက်လည်းရှက် ကြောက်လည်းကြောက်မိနေတော့သည်။ ထိုအခါ ကျော်ကျော်ကသူမအနားကို ပိုပြီးတိုးကပ်လာလေသည်။
"နင်နင် ငါ့ကိုဘာလုပ်မလို့လဲ။ ငါ့ကိုမတရားမလုပ်နဲ့နော် အဟင့်ဟင့်။"
" ငါနင့်ကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ နင့်ကိုကူညီမလို့ပါ။ အခုဒီကျွန်းပေါ်မှာ နင်နဲ့ ငါနှစ်ယောက်ထဲပဲရှိတာ။"
" အဲဒါနင့်ကြောင့်ပေါ့ နင်ငါ့ကို မဟားဒယားလုပ်တာကိုး။"
" အဲဒီအတွက်နင့်ကိုငါ တောင်းပန်ပါတယ်ဟာ။ ငါနည်းနည်းမူးနေလို့ပါ။ ပြီးတော့ နင်ကနင်က အရမ်းလှတာကို။"
ကျော်ကျော်သည် ပြောရင်းနဲ့ တံတွေးကိုမျိုလိုက်သည်။ ဟုတ်တယ်လေ။ အလွန်လှသော ကောင်မလေးနဲ့ ကျွန်းတစ်ခုမှာနှစ်ယောက်ထဲ ပြီးတော့ အပေါ်ပိုင်းက ဗမာရင်ဖုံးအင်္ကျီလေးနဲ့ အောက်ပိုင်းကျတော့ အတွင်းခံလေးနဲ့ မိန်းကလေးကို ဘယ်ယောကျာ်းမလိုးချင်ပဲနေမလဲ။ ကျော်ကျော်က စိတ်ကိုအတင်းထိန်းလိုက်ကာ
" ငါနင့်အတွက် တစ်ခုခုသွားရှာပေးဦးမယ် ဒီမှာခဏစောင့်ဦးနော်"
" သိပ်အဝေးကြီးမသွားနဲ့ဦး ငါကြောက်တယ်ကျော်ကျော်"
သူမ စကားကြောင့် ကျော်ကျော်က ညိုညိုအောင်ကိုသနားသွားမိသည်။ အော်သူ့ခမျာ ကြောက်ရှာ ရှက်ရှာလိမ့်မည်။
" အေးပါ စိတ်မပူပါနဲ့ဟာ။ အစကငါ့ဘောင်းဘီချွတ်ပေးမလို့ပဲ ဒါပေမယ့် နင့်ဟိုဟို ဟာက အရမ်းကြီးတော့မတော်လောက်ဘူး ပြီးတော့ငါက အတွင်းခံလည်းမပါလို့ "
" လာပြန်ပြီလား။ နင်ငါ့ကိုထပ် စော်ကားမယ်တော့မကြံနဲ့နော် အသက်ချင်းလဲပလိုက်မယ်။"
" စိတ်ချပါဟာ ငါအဲဒီလောက်လဲ အောက်တန်းမကျပါဘူး။"
သူမအကြောက်အောင်သာပြောရတယ် ဘောင်းဘီကကွဲထွက်မတတ်တင်းနေသည်။ ကျော်ကျော်က ကမ်းစပ်တစ်လျှောက် အနည်းငယ်ရှာဖွေကြည့်လိုက်ရာ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ကမ်းစပ်မှာ အိတ်တစ်အိတ်ကို တွေ့လေသည်။ အိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်ရာ ဓားအသေးတစ်လက်နှင့် ရေ၀င်ပြီး ပျက်စီးနေသော တိုလီမှုတ်စ များသာတွေ့ရသည်။ အ၀တ်အစားတော့မပါပေ။ ဆက်လက်ပြီး ရှာသော်လည်း အသုံးသည့် အရာတစ်စုံတစ်ရာကိုမှ မတွေ့သောကြောင့် ညိုညိုအောင်ဆီသို့ပြန်လာသည်။ ကမ်းစပ်မှာ သူမသည် ဒူးနှစ်လုံးကိုကွေးပြီး ထိုဒူးပေါ်တွင်လက်ပိုက်ပြီး ထိုင်နေရာ စွင့်ကားသောဖင်ကြီးမှာ ပိုမိုပေါ်လွင်နေတော့သည်။
" အင်းငါတော့ ခက်တော့တာပဲ ဘယ်အချိန်အထိများ ငါတောင့်ခံနိုင်ပါ့မလဲ" စိတ်ထဲမှာတွေးရင်းမျက်စိကိုလည်း သူမရဲ့အောက်ပိုင်းကို မကြည့်မိအောင် နေပြီး
" ညိုညိုရေ ဘာမှတော့မတွေ့ဘူး အဲဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ် ငါ့တီရှပ်ကိုဖြဲလိုက်ပြီး နင့်အောက်ပိုင်းမှာပတ်ထားလိုက် ငါ့ခါးပတ်နဲ့စည်းထားလိုက် "
မာနရှင်မလေးလည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ဘဲ ကျော်ကျော်ပြောသလိုလိုက်လုပ်လိုက်ရတော့သည်။ သူမပုံသည် အခုမှ ဟာဝါရီကျွန်းသူလိုလို ဘာလိုလိုနှင့်။ ထိုသို့နေရင်းနဲ့ ညမှောင်လာရာ ကျော်ကျော်ခြောက်သွေ့ နေသော အုန်းလက်များကိုရှာဖွေကာ သူ့အိတ်ကပ်ထဲမှာပါလာသောမီးခြစ်အကောင်းစားဖြင့်မီးမွှေးပြီး
"ညိုညို နင်အိပ်ချင်အိပ်တော့လေ။ ငါဒီမှာစောင့်ပေးမယ်။"
သူမသည်ကျော်ကျော်ရဲ့စကားကြောင့် လန့်သွားလေသည်။ သူမအရမ်းအိပ်ချင်နေပြီ။ သို့သော်မအိပ်ရဲ။ ယောက်ျားတွေအကြောင်းသိလို့ဖြစ်သည်။ ယောကျာ်းတွေအားလုံးက နှာဘူးတွေ။ နောက်ကျော်ကျော် သူမရဲ့ ဘောင်းဘီတိုကို ခိုးရှူပြီး ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်လုပ်သည့်အကောင် ပြီးတော့ ဖြူပြစ်ပြစ်အရည်များ ထိပ်နီနီ အချောင်းတုတ်တုတ်ကြီးများ အို ငါဘာတွေမြင်ယောင်လာပါလိမ့် ဒီလောက်ရွံစရာကောင်းတဲ့ဟာကိုများ။
ကျော်ကျော်ကသူမ သူ့ကိုစိတ်မချမှန်းသိသည်။ ထို့ကြောင့်
" နင်ငါ့စိတ်မချဘူးမလား။ ရော့အဲဒါကြောင့်နင်စိတ်ချရအောင် ဒီဓားကိုယူထား"
" ကဲဒီလောက်ဆို ကျေနပ်ပြီမလား။ နင်မအိပ်သေးလည်း ငါတော့အိပ်တော့မယ်"
ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ ကျော်ကျော်က သူမကိုကျောပေးပြီးအိပ်လေတော့သည်။ ညိုညိုသည် မီးပုံနဘေးတွေထိုင်ပြီး ငိုက်လာလေသည်။ ဘယ်လိုပဲအိပ်မပျော်အောင် ကြိုးစားကြိုးစား ပင်ပန်းမှုဒါဏ်ကြောင့် ငိုက်လာပြီး အိပ်ပျော်သွားလေသည်။မည်မျှ ကြာအောင်အိပ်ပျော် သွားသည်မသိ သူမရဲ့ကိုယ်လုံးပေါ်ကို တစ်စုံတစ်ရာက ဖိထားသလိုခံစားရသောကြောင့် လန့်နှိုးလာလေသည်။ သူမမြင်လိုက်ရသည်မှာ ကျော်ကျော်ကသူမကို တက်ခွထားပြီး လက်နှစ်ဖက်က သူမရဲ့ နို့နှစ်လုံးကိုအားရပါးရ ကိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်. လရောင်မလင်းတစ်လင်းတွင် ကျော်ကျော်ရဲ့ မျက်နှာမှာ ရမက်ခိုးတွေဝေနေပြီးအလွန် စက်စုပ်စရာကောင်းလေသည်။ သူမသည် အားရှိသလောက်ရုန်းသည်။ သို့သော် ရုန်းကန်နိုင်အားများ ပျောက်ဆုံးနေသည်။ ကျော်ကျော် သည်သူမရဲ့ နို့အစုံကို အားရပါးရကိုင်သည်။ ပြီးနောက် သူမရဲ့စိကပ်နေတဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကို ဖြဲပြီး သူမရဲ့အဆီတစ်ထပ် အသားတစ်ထပ် ဖြစ်နေတဲ့ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးကို သူ့ရဲ့ ပါးစပ်နှင့် ပယ်ပယ်နှယ်နှယ်ယက်လေသည်။ နူးညံ့လှသော ညိုညိုရဲ့ အဖုတ်လေးမှာ ကျော်ကျောရဲ့ လျှာကြမ်းကြီးနဲ့ အယက်ခံရသောကြောင့် ယားသလိုလိုကျဉ်သလိုလိုနဲ့ နေလို့မရအောင်ခံရခက်လှသည်။
" အမေရေ အဖေရေ ဒီမှာ သမီးကို မဒိန်းကျင့်နေတယ်ရှင့် ခွေးကျင့်ခွေးကြံကြံနေပါတယ်။ "
ညိုညိုက အားကုန်အော်လိုက်ရာ ကျော်ကျော် ကစိတ်တိုလာပြီး
"အံမယ် ကောင်မ ဒီလောက်လူသူမနီးတဲ့ ကျွန်းပေါ်မှာတောင်ဒီလောက် အာလာပြဲနေသေးတယ်။ နင့်ပါးစပ်ကို ငါ့းလီးနဲ့လိုးပြီး ပိတ်ရမယ်"
ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ကျော်ကျော်က သူ့ရဲ့ ၇ လက်မ လောက်နီးနီးရှည်သောလီးကြီးကိုဆွဲထုတ်ပြီး ညိုညိုအောင်ပါးစပ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်လေသည်။
"အု အု အွပ် အွပ်"
ညိုညိုအောင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲသို့လီးကြီးဝင်လာရင် အော်နေသောအသံများပင်ရပ်သွားတော့သည်။ ဒစ်ကြီးမှာ ကြီးလွန်းသဖြင့် သူမရဲ့ ပါးစပ်နှင့်မဆံ့မပြဲဖြစ်နေလေသည်။ ပါးစပ်နှင့် ဒစ်မဆံ့ ပါဘူးဆိုမှ လီးတစ်ချောင်းလုံး ပါးစပ်ထဲဝင်လာသောအခါ ညိုညိုမှာ အသက်ကိုကိုမရှူနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာသည်။ ကျော်ကျော်ကလည်း သူမကိုလုံးဝမညှာပဲ ပါးစပ်ကိုအတင်းလိုးလေသည်။ ညိုညိုအောင်မှာ သူမရွံရှာလှပါသည်ဆိုသော လီးမည်းမည်းကြီးဖြင့် ပါးစပ်ကိုမညှာမတာလိုးခံနေရလေသည်။ လိုးနေရင်းနဲ့ ကျော်ကျောသည် တစ်ဇတ်ဇတ် တုန်သွားပြီး သုတ်ရေ ဖြူဖြူပြစ်ပြစ်များ ညိုညိုအောင်ပါးစပ်အတွင်းသို့ ဒလဟောဝင်လာသည်။ ညိုညိုအောင်သည် သူဧ။် ပါးစပ်ထဲသို့ဝင်လာသော သုတ်ရေများကို အလွန်ပင်ရွံပြီး ထွေးထုတ် ရန်ကြိုးစားသော်လည်း ပါးစပ်အပြည့် လီးကြီးနဲ့ အလိုးခံနေရသောကြောင့် လရည်များကိုမျိုချလိုက်ရပါတော့သည်။
" ဟေ့ညိုညို "
ကျော်ကျော်ရဲ့ အသံကိုသူမသည်ကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်နှင့် ရုတ်တရက် သူမကိုယ်လုံးကိုဆွဲခါခြင်းခံ လိုက်ရသဖြင့် ကျော်ကျော်ကို အားကုန်တွန်းလိုက်ရာ သောင်ပြင်ပေါ်ကိုလဲနေကျနေသောကျော်ကျော်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုအခါမှ သူမအိပ်မက် မက်နေကြောင့်ကိုယ့်ဟာကို သိလိုက်ရသည်။
"နင်အိပ်မက်မက်နေတာလား တစ်အားအော်လို့ငါစိတ်ပူပြီးနှိုးလိုက်တာ။ ဒီလောက်တောင်အော်နေတာ ဘာအိပ်မက်ဆိုးများမက်လို့လဲ"
ညိုညိုအောင်၏ မျက်နှာသည် ဖြန်းကနည်းနီသွားပြီး
" ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ဟိုလျှောက်မက် ဒီလျှောက်မက်တာပါ။"
ပြောရင်းနဲ့ညကအိပ်မက်ကိုပြန်မြင်ယောင်မိသော် ကျော်ကျော်ကို မသတီသလိုဖြစ်သွားသည်။ ဟင်း ရွံဖို့ကောင်းတဲ့အကောင် အပြင်မှာငါ့ကိုဒီလိုလာလုပ်ကြည့်ပါလား ဓားနဲ့ကိုထိုးသတ်ပလိုက်ဦးမယ်
ဟုစိတ်ထဲမှာတွေးထားမိလေသည်။ ကျော်ကျော်သည် သူမယောင်နေသံကို တစ်စွန်းတစ်စတော့ကြားလိုက်သည်။ ဘာတဲ့ ကျော်ကျော် လွှတ်နော် ဆိုလားဘာလားပဲ။ ဒီကောင်မလေးဘာတွေများအိပ်မက်မက်ပါလိမ့်။
ကျော်ကျော်နဲ့ ညိုညိုအောင်တို့သည် ကျွန်းတစ်ဝိုက်လေ့လာကြည့်ရာ ကျွန်းတစ်နေရာတွင် ရေကန်လေးတစ်ကန်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ရေကန်က ရေများကအလွန်ကြည်လင်လှသည်။ ရေကန်ကမ်းခြေကိုပင်မြင်နေရသည်။ ကျောက်ခဲဖြူဖြူများနှင့် ငါးသေးသေးလေးများကို အတိုင်းသားမြင်နေရသည်။ ထိုရေကန်ကလေး၏ ဆွဲဆောင်မှုကြောင့် ညိုညိုသည်ရေချိုးချင်စိတ်ကိုတားမရတော့ပေ။ လူကလည်းညစ်ပတ်နေပြီ မဟုတ်ပါလော။
"ကျော်ကျော် ငါရေချိုးမလို့။ နင်ဟိုးခြုံနောက်နားမှာသွားစောင့်နေ။ လုံးဝလာမကြည့်နဲ့နော်။ နင်ယောကျာ်းကောင်းဆိုတာငါယုံတယ်။ တစ်အားဝေးဝေးလည်းမသွားနဲ့ဦး။"
" အေးပါဟာ စိတ်ချပါ။"
ယောကျာ်းကောင်းဆိုသောစကားနဲ့ ကျော်ကျော့်ကို ချုပ်ထားလေသည်။ကျော်ကျော်လည်း ညိုညိုအောင်ကိုကျောခိုင်းကာ ခြုံပုတ်နားတွင်ထိုင်နေလေသည်။ လူကသာထိုင်နေသည် စိတ်ကတော့ ညိုညိုမည်သို့ရေချိုးနေသည်ကိုတွေ့ချင်နေသည်။နောက်ဆုံးတော့ "အို နည်းနည်းချောင်းကြည့်တာပဲ အသားပဲ့ပါသွားတာမှမဟုတ်တာ"
ကျော်ကျော် ခြုံပုတ်ကြားထဲမှ ညိုညိုအောင်ကိုလှမ်းချောင်းလိုက်ရာ တစ်သက်တွင်တစ်ခါမှတွေ့ဖူးမည် မထင်သည့်မြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရသည်။ နံနက်နေလေးက အ၀တ်အစားမဲ့နေသော ကောင်မလေးအပေါ်သို့ ထိုးကျနေသည်။ ရေစက်ရေပေါက်များက ကြည်လင်ချောမွတ်နေသောအသားညိုညိုလေးပေါ်တွင်စီးကျသွားရာ နေရောင်လေးနှင့်ဆိုတော့ တစ်လက်လက် လက်နေသယောင်မြင်နေရသည်။ လက်တစ်ဆုပ်စာ နို့နှစ်လုံးကလည်း ကျော်ကျော့်ကို အသက်ရှူမှားစေသည်။ အမြဲတစေ မာနနဲ့တောက်ပနေသော မျက်လုံးလေးနှင့် နို့နှစ်လုံးမှာ အလွန်တရာလိုက်ဖက်လှသည်။ ရေတိမ်တိမ်လေးတွင် ထိုင်ပြီးချိုးနေရာမှ မတ်တပ်ရပ်လိုက်သောအခါ မြင့်မားသောအရပ်လေးနှင့်အတူ အရင်းပိုင်းတွင် တုတ်ပြီးအောက်ပိုင်းသို့သွယ်ဆင်းသွားသော ပေါင်တံရှည်ရှည်လေးမှာလည်း သူမရဲ့ အလှဆုံးနေရာပင်။ အဆီပိုမရှိသော ဗိုက်သားပြင်ချပ်ချပ် လေး ထို့နောက်တွင် မိန်းမတို့ရဲ့ ရတနာအဆီဗူးလေးမှာ အမွှေးမည်းမည်းလေးများနှင့် ခြံရံထားပြီး နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာမှာစိကပ်နေလေသည်။ အစေ့လေးပင်မမြင်ရချေ။ တကယ့် အဖိုးတန်အပျိုစင်မလေးပင်။ ကျော်ကျော်သည် မာနရှင်မလေးရဲ့ ကိုယ်တုံးလုံးပုံလေးကြောင့် သူ၏လီးမှာလည်း ဘောင်းဘီအတွင်းမှ အလွန်အမင်းရုန်းကန်နေလေသည်။ ထိုအချိန်တွင်ညိုညိုအောင်က ရုတ်တရက်အလန့်တကြားထအော်လိုက်လေသည်။
ညိုညိုအောင်ရဲ့အော်သံကြောင့် ကျော်ကျော်လည်းချောင်းနေရာမှ ထွက်ကာညိုညိုအောင်နားသို့ပြေးသွားလိုက်လေသည်။
" ဘာဖြစ်လို့လဲ ညိုညို"
" ငါ့ခြေထောက်ကိုဘာကောင်ကိုက် သွားလည်းမသိဘူးနာလိုက်တာ။ မြွေလားမသိဘူး"
ကျော်ကျော်က ညိုညိုအောင်ရဲ့ ခြေထောက်ကိုကြည့်လိုက်ရာ အကောင်ကိုက်သွားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရေကန်ထဲမှ ကျောက်ခဲအချွန်နှင့် သူမခြေထောက်ရှသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ညိုညိုအောင်မှာ ခြေထောက်ရုတ်တရက်နာသွားပြီး ခြေထောက်မှသွေးများကို မြင်လိုက်ရသောကြောင့် အလွန်ထိတ်လန့်သွားပြီး သူမကိုယ်တုံးလုံးနှင့်ကျော်ကျော်နားတွင် ထိုင်နေသည်ကို သတိမထားမိချေ။ ညိုညိုအောင်ကသတိမထားမိပေမယ့် ကျော်ကျော်ကတော့သတိထားမိလေသည်။ အော်အခုကျတော့လည်း မာနမင်းသမီးလေးက သူ့ရှေ့မှာကိုယ်တုံးလုံးနှင့်ထိုင်နေပါပေါ့လား။ သူမရဲ့ မို့မောက်နေတဲ့ရင်သားညိုညိုလေးကို မကြည့်မိအောင်သတိထားရင်း ခြေထောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သော်လည်း ဗိုက်သားချက်ချက်လေးအောက်မှ အမွှေးမည်းမည်းလေးများဖြင့် ခြံရံထားသော စောက်ဖုတ်လှလှလေးကိုဘဲ မြင်မိတော့သည်။ကျော်ကျော်ရဲ့ အကြည့်ရိုင်းကိုမြင်မှ ညိုညိုအောင်သည် မိမိကိုယ်မိမိ သတိထားမိသည်။
" အ်ို "
" ကျော်ကျော် နင်ဘာကိုကြည့်နေတာလဲ အခုချက်ချင်းငါ့ရှေ့ကထွက်သွားစမ်း။ "
" နင့်ခြေထောက်မှာဒါဏ်ရာကြီးနဲ့လေ ငါကြည့်ပေးမယ်။"
" မလိုဘူး။ နင်အခုချက်ချင်းထွက်သွားစမ်းလို့ပြောနေတယ်နော်"
ညိုညိုအောင်က ရှက်စိတ်မွှန်ပြီး တအားကြုံးအော်သည်။ သူမရဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကတော့ သူမရဲ့ ဖွံ့ထားတဲ့ရင် အစုံကို ကြက်ခြေခတ်ပုံစံဖြင့်ကာကွယ်ထားလေသည်။ သို့သော် အပေါ်ကဖုံး အောက်ကပေါ်ဆိုသလို သူမရဲ့ ကြီးထွားတဲ့ဖင်နှစ်လုံးကိုတော့ မည်သို့မှဖုံးကွယ်လို့မရပေ။
ကျော်ကျော်သည် မိမိရဲ့ စိတ်ရိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီး ကျောပေးရပ်ကာ
" ကဲ ငါဟိုဘက်ကို ကျောပေးနေတယ် နင်ဝတ်စရာရှိတာမြန်မြန်ဝတ်လိုက်။ ၀တ်ပြီးရင် နင့်ရဲ့ခြေထောက်ကို ငါကြည့်ပေးမယ်။"
ကျော်ကျော် ဟိုဘက်ကိုလှည့်နေစဉ် သူမက အ၀တ်အစားကိုမြန်မြန်ဝတ်လိုက်သည်။
" ရပြီ "
ကျော်ကျော်က ညိုညိုအောင် ရပြီဆိုမှ ဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်ရာ နီရဲနေသော အရှက်မျက်နှာနှင့်ညိုညိုအောင်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ အော် ခါတိုင်း မာနနှင့် အမြဲတမ်းတင်းမာနေသောမျက်နှာလေးမှာ အရှက်မျက်နှာအဖြစ်ပြောင်းနေသည်မှာ အလွန်ရင်ခုံဖွယ်ကောင်းလှသည်။ ကျော်ကျော်မှာလည်း သူမအား ကိုယ်ချင်းစာမိသည်။ မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက် တစ်စိမ်းယောကျာ်းလေးရှေ့မှာ အ၀တ်တစ်စုံတစ်ရာမပါပဲ နေရခြင်းကို မည်မျှရှက်ရှာပေမည်နည်း။
ကျော်ကျော်က ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် သူမ၏ခြေထောက်ကိုယူကြည့်လိုက်ရာ ခြေမကွဲသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဏ်ရာမှာ သိပ်မကြီးသော်လည်း သွေးများက ယိုစီးနေသည်။ ကျော်ကျော်က ဘာမပြောညာမပြောနှင့် ညိုညိုအောင်ရဲ့ ခြေမကို ပါးစပ်နှင့်ငုံလိုက်လေသည်။
" အို နင်ဘာလုပ်တာလဲ"
သူမ၏ ခြေမကိုစုပ်ခြင်းခံရသောကြောင့် ညိုညိုအောင်လန့်သွားသည်။
" နင့်ဒါဏ်ရာက သွေးတွေထွက်နေတယ်။ ငါ့အာငွေ့နဲ့ သွေးခြောက်သွားအောင်လုပ်ပေးမယ်။ နို့မို့ဆိုရင် ဒါဏ်ရာက ရောဂါပိုးဝင်ရင်ပိုဆိုးသွားလိမ့်မယ်။ ခဏလောက်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေ။"
ကျော်ကျော်ပြောလိုက်မှ ညိုညိုအောင်လည်းငြိမ်သွားသည်။ သူမသည် ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေမစုပ်ပေးခြင်းကိုခံနေရသဖြင့်စိတ်ထဲတွင် ဖိုတိုတိုပင်ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် ကျော်ကျော်ရဲ့ ဂွင်းထုနေပုံများ အိပ်မက်ထဲတွင် သူမ၏ပါးစပ်ကို အတင်းလိုးနေသည်များကို ပြန်မြင်ယောင်လာသောအခါ ကျော့်ကျော့်အားစိတ်မချသောစိတ်များပြန်ဝင်လာပြန်သည်။
" မပြီးသေးဘူးလား နင့်ဟာက သွေးသိပ်ပါပြီ တော်တော့"
ကျော်ကျော်လည်း ညိုညိုအောင်အား အတော်ပင်ချဉ်သွားသည်။ သူ့မှာတော့ ယောကျာ်းတန်မဲ့ သူမရဲ့ခြေထောက်ကို တောင်မရွံမရှာ စုပ်ပေးရသည်။ သူမကသူ့ကိုမယုံသည့်ဟန်ဖြင့်ပြောရက်သည်။သို့သော် ကျွန်းတစ်ခုတွင် နှစ်ယောက်ထဲဆိုသည့်စိတ်ကြောင့် သူမအားခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီး သွေးတိတ်သွားသောသူမ၏ ခြေထောက်ကို သူ့ရဲ့ ဘောင်းဘီ အနားစကိုဖြဲပြီးစည်းပေးလိုက်သည်။
" ကဲရပြီ ငါ့လက်ကို အားယူပြီးထလိုက်"
" ရတယ် မလိုဘူး ငါ့ဟာငါထမယ်။ "
အရေးထဲ သူမက မာနကြီးပြနေသေးသည်။ ကျော်ကျော်လည်း အမြင်ကပ်ကပ်နှင့် ဘာမှမပြောတော့ပဲ ရပ်ကြည့်နေလိုက်သည်။ သူမသည် ခက်ခက်ခဲခဲ ထပြီး တစ်လှမ်းနှစ်လှမ်းလျှောက်ကြည့်သေးသည်။ သို့သော ခြေထောက်က အလွန်စပ်လာလေသည်။ ထိုအချိန်တွင်သူမသည် ရုတ်တရက်လေပေါ်သို့မြှောက်ပါသွားသည်။
ကျော်ကျော်က ဘာမပြော ညာမပြောနှင့် ညိုညိုအောင်ကိုပွေ့ချီလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ညိုညိုအောင်သည် ကျော်ကျော်ရဲ့ ရင်ခွင်ကို တစ်ဘုံးဘုံးထုကာ ရုန်းလေသည်။
" အေးနင် ထပ်ထု ပြီးရုန်းရင် ငါနင့်ကို ပစ်ချပလိုက်မှာနော်နင့်ကို ထားခဲ့တော့မှာ"
ကျော်ကျော်က ခြိမ်းခြောက်လိုက်မှ သူမငြိမ်သွားကာ အသာတကြည်လိုက်ခဲ့လေသည်။ စိတ်ထဲမှာတော့ မကျေနပ်ပေ။ သူမ တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ် တစ်စိမ်းယောကျာ်းတစ်ယောက် ရဲ့ပွေ့ချီခြင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ်ခံလိုက်ရသဖြင့် သူမရွှေရင်အစုံမှာ တစ်ဒိန်းဒိန်းနှင့်ခုန်နေလေသည်။ ကျော်ကျော်သည် ညိုညိုအောင်အား သူမတို့အိပ်စက်ရာနေရာသို့ပွေ့ခေါ်လာပြီး သူမအားသောင်ပြင်ပေါ်တွင်ငြင်ငြင်သာသာလေးချကာ
"ငါအစားသွားရှာလိုက်ဦးမယ်။ ငြိမ်ငြိမ်လေးနေနော်။ ငါခဏနေပြန်လာမယ်။"
ကျော်ကျော်က သူမကိုထားသွားပြီး အချိန်အတော်ကြာမှ ငါးအနည်းငယ်နှင့် ပြန်လာသည်။ ယင်းသို့ဖြင့်ညသို့ရောက်လာလေသည်။
ညရောက်လာသော် ညိုညိုအောင်နှင့် ကျော်ကျော်တို့သည် သောင်ပြင်ပေါ်တွင် မနီးအဝေးအိပ်ကြလေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်တွေကသာ လှဲနေကြသော်လည်း စိတ်တွေမှာတော့ နှစ်ယောက်စလုံးလှုပ်ရှားနေလေသည်။ ညိုညိုအောင်၏ စိတ်တွင် ရှက်စိတ် ကျော်ကျော်အားမယုံသောစိတ်တို့ပေါင်းကာ ရင်ခုန်နေပြီး ကျော်ကျော်မှာကား ညိုညိုအောင်ကို လိုးချင်စိတ်ကိုမနည်းထိန်းနေရသည်။ မနက်က သူမရဲ့ လှပသောကိုယ်လုံးလေးကိုပြန်အထပ်အထပ်အခါခါမြင်ယောင်မိလေသည်။ ကျော်ကျော်က ညိုညိုအောင်ဘက်ကို လှည့်မကြည့်မိစေရန်ကြိုးစားပြီး တစ်ခြားအတွေးများကို ဇွတ်တွေးရာ သူငယ်ငယ်ဖြစ်ရပ်များကိုပြန်မြင်ယောင်လာမိတော့သည်။
ကျော်ကျော်ငယ်စဉ်က သူအားထိန်းလာခဲ့သော မမကိုပြန်သတိရလာတော့သည်။ ကျော်ကျော် ငယ်စဉ်နှစ်နှစ်သားအရွယ်လောက်ကတည်းက မမမြိုင်ကို ကျော်ကျော့်မိဘများက မွေးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မမမြိုင်သည် ကျော်ကျောထက် ၇ နှစ်ခန့်သာကြီးသည်။ သို့သော် ကျော့်ကျော့်အား ငယ်စဉ်ကတည်းက အမလိုတစ်ဖုံ ဆရာမလိုတစ်နည်း သင်ကြားဆုံးမပေးသူဖြစ်လေသည်။ မမမြိုင်ကကျော်ကျော့်အားချစ်သလို ကျော်ကျော်က လည်း မမမြိုင်ကိုအလွန်ချစ်သည်။ ငယ်စဉ်က မမမြိုင်ကိုယ်တိုင်ကျော်ကျော်ကို ထမင်းခွံ့ကျွေး ရေချိုးပေးလေ့ရှိသည်။ကျော်ကျော်လူပျိုပေါက် အရွယ်လောက်ရောက်မှ ရေမချိုးပေးတော့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထမင်းမှာတော့ ရံဖန်ရံခါ ခွံ့ကျွေးတုန်းဖြစ်သည်။ မှတ်မှတ်ရရ ကျော်ကျော် ကိုးတန်းစာမေးပွဲမှာ အဆင့်နှစ်ရတော့ အပျော်လွန်ပြီးပြန်လာရာမမမြိုင်နှင့်တွေ့သောအခါ
" မမမြိုင်ရေ ကျွန်တော် ကိုးတန်းငါးခန်းပေါင်း အဆင့်နှစ်ရတယ်ဗျ။"
" ဟယ် ဟုတ်လား ငါ့မောင်လေးကတော်လိုက်တာ"
ကျော်ကျော်လည်း ၀မ်းသာအားရနှင့် မမမြိုင်ကို ဖက်ပြီး အားရပါးရနမ်းလိုက်သည်။ အစကတော့ ကျော်ကျော်သည် ရိုးရိုးသားသား အပျော်လွန်ပြီး ဖက်နမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဖက်ရင်းဖက်ရင်း မမမြိုင်၏ နူးညံ့သောအထိအတွေ့ မွှေးပျံ့သောရနံ့တို့ကြောင့် လူပျိုပေါက်လေးကျော်ကျော်၏ လီးမှာ ပုဆိုးထဲမှ သိသိသာသာကြီးထောင်ထွက်လာကာ မမမြိုင်ကို သွားထောက်မိလေတော့သည်။
မမမြိုင်လည်း သတိလက်လွှတ်ကာ ငြိမ်ခံနေပြီးမှ သူမအား ခပ်နွေးနွေး အချောင်းကြီးလာထောက်နေကြာင်း သတိထားမိကာ။ကျော်ကျော်ရဲ့ ဖက်ထားသောလက်ကိုဆွဲဖယ်ပြီး
"တော်ပြီလေမောင်လေးရဲ့ မမ အသက်ရှူရကြပ်လာပြီ။ သွားအခန်းထဲသွားနားတာ့"
ကျော်ကျော်လည်း အခန်းမမမြိုင်ကို လွှတ်ပေးပြီး အခန်းထဲသို့ ရင်တလှပ်လှပ်နှင့်ဝင်သွားသည်။ သူမမမြိုင်အပ်ါမရိုးမသားစိတ်ဝင်နေပြီဖြစ်သည်။ မမရဲ့ ပြေပြစ်တဲ့ငါးရံ့ ကိုယ်လုံးလေးရေးအထိအတွေ့ကြောင့်မခံနိုင်တော့ဘဲ ကျော်ကျော်သည် အိပ်ယာပေါ်ကိုလှဲကာ ဂွင်းထုနေမိတော့သည်။ ကျော်ကျော်မှာ စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားနေသဖြင့် သူရဲ့အခန်းတံခါးက သေသေချာချာမပိတ်မိဘဲ တံခါးဟနေသည်ကို သတိမပြုမိပေ။ ကျော်ကျော်ဂွင်းထုနေစဉ်မမမြိုင်က ကျော်ကျော်အခန်းရှေ့ကိုရောက်လာကာ ဟနေသောအခန်းတံခါးမှ ကျော်ကျော်အားတွေ့သွားလေသည်။
" အို" မြိုင်ကတွေ့လိုက်ရသောမြင်ကွင်းကြောင့် မျက်လုံးများပြူးသွားလေသည်။ သူမက တစ်ချိန်လုံးကလေးဟုသာမြင်နေသော ကျော်ကျော်မှာ သူ့ရဲ့ ကြီးမားပြီးသန်မာပြီး အကျောပြိုင်းပြိုင်းထနေသောလီးကြီးကို လက်ဖြင့်အထက်အောက်ဂွင်းထုနေသည်မဟုတ်လား။ ကျော်ကျော်ရဲ့ ပါးစပ်ကလည်း
" မမမြိုင် မမမြိုင်နေရ" ဟုညည်းနေသည်။ မြိုင်မှာ ဟယ် ဒီကလေးငါ့ကို ငါ့ကို စိတ်ထဲမှတုန်လှုပ်သွားပြီး အပြင်မှနေပြီး ချောင်းဟန့်လိုက်သည်။
"အဟမ်း ကျော်ကျော်ရေအိပ်နေတာလား မမမြိုင်ဝင်ခဲ့မယ်နော်"
ကျော်ကျော်လည်း မမမြိုင်အသံရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရသောကြောင့် လီးကို ပုဆိုးထဲအမြန်ထည့်လိုက်ပြီး
" မအိပ်ပါဘူး မမမြိုင် ၀င်လာလို့ရပါတယ်" ဟု အသံပြုလိုက်သည်။ စိတ်ထဲတွင်လည်း သူဂွင်းထုနေသည်ကိုမမမြိုင်မှ မြင်သွားလားမသိဘူးဟု စိတ်တွင်ပူနေမိသည်။ မမမြိုင်မှာ အခန်းထဲသို့ဝင်လာပြီး ကျော်ကျော်ဘေးတွင်ဝင်ထိုင်ကာ
"မောင်လေးရေ မောင်လေးက လူသာထွားတာ အသက်ကငယ်သေးတယ်နော်။ ဟိုစိတ်ဒီစိတ်တွေမမွေးရဘူး သိလား။"
" ဟာ မမမြိုင်ကလည်း ကျော်ကျော်ဘာစိတ်မှမမွေးပါဘူး ကျော်ကျော်က ငယ်သေးတာကို။ "
" အင်းအဲဒါဆိုပြီးတာပဲ။ မင်းက အခုမှငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာ။ လူကောင်ထွားတိုင်း လူကြီးဖြစ်သေးတာမဟုတ်ဘူး။"
မမမြိုင်ရဲ့ ပြောစကားကိုကြားတော့ ကျော်ကျော်မှာ သူဂွင်းထုနေသည်ကို မမမြင်သွားကြောင်းရိပ်မိလိုက်လေသည်။ ထိုသို့ရိပ်မိလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ကျော်ကျော်ရဲ့ ကျစပြုနေသော လီးမှာ အစွမ်းကုန်ထောင်လာတော့သည်။ ထိုအခါ ပုဆိုးအုပ်ယုံတင်အုပ်ထားသော လီးချောင်းကြီးမှာ အပြင်သို့ထိုးထွက်လာတော့သည်။
"အမလေး ကျော်ကျော် နင့်ဟာကြီးက"
မမမြိုင်က ကျော်ကျော့် ငပဲ့အကြီးကြီးကို ကြည့်ကာအလန့်တကြားထအော်လေသည်။ ကျော်ကျော်ကလည်း မထူးတော့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် မတ်တပ်ရပ်ပြီး ပုဆိုးကိုကွင်းလုံးချွတ်လိုက်ကာ
" မမမြိုင် ကျွန်တော်ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးဗျ" ဟုပြောပြီးမမမြိုင်ကိုအတင်းဖက်လိုက်သည်။
မမမြိုင်မှာ ရုတ်တရက်အဖက်ခံလိုက်ရသောကြောင့် လန့်သွားပြီး ကျော်ကျော်ကို သူမလက်နှစ်ဘက်ဖြင့်တွန်းလိုက်ရာ နှစ်ယောက်စလုံးခုတင်ပေါ်သို့ထပ်ပြီးကျသွားလေသည်။ ဒီတစ်ခါတော့ကျော်ကျော်က မမမြိုင်ကိုမလွှတ်ပေးပဲ မမမြိုင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ငုံစုပ်လိုက်ရာ မမမြိုင်မှာ တကိုယ်လုံးတုန်သွားလေသည်။
" အု အု "
ကျော်ကျော်က မမမြိုင်နှုတ်ခမ်းကို အတင်းဖိပြီး စုပ်နမ်းထားသောကြောင့် မမမြိုင်မှာ အသံပင်ကောင်းကောင်းမထွက်တော့ပေ။ လူပျိုပေါက်လေးကျော်ကျော်မှာ မမမြိုင်၏ အလွန်နူးညံ့လှသော ကိုယ်လုံးအထိအတွေ့၊ မွှေးပျံ့ပြီး ချိုအီလှသော နှုတ်ခမ်းလှလှ လေးတို့ကြောင့် စိတ်အလွန်ထန်လာကာ လွှတ်ပေးဖို့ စိတ်ကူးလုံးဝမရှိတော့ပေ။ မမမြိုင်ရဲ့ ခါးကိုဖက်ထားရာမှ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် သူမ၏ ဖင်လုံးကျစ်ကျစ်လေးကို ဆုတ်နယ်လိုက်ရာ အပျိုစင်မမမြိုင်မှာ ရင်တစ်ဒိုင်းဒိုင်းခုန်လာသည်။
" ကျော်ကျော် မောင်လေးရေ လွှတ်ပါကွယ်။ မလုပ်ပါနဲ့ မမမြိုင်တောင်းပန်ပါတယ်။"
ပါးစပ်ကသာ တောင်းပန်နေရသော်လည်း သူမရဲ့ အဖုတ်ကတော့ အရည်တွေရွှဲလာလေသည်။ ကျော်ကျော်က တော့ မမမြိုင်ရဲ့တောင်းပန်သံကို ဂရုမစိုက်ပဲ မမမြိုင်ရဲ့ မျက်နှာ အနှံ့ကို နေရာလွတ်မကျန်အောင် နမ်းလိုက်သည်။ မျက်နှာပြီးတော့ လည်တိုင်ကျော့ကျော့လေးကိုအငမ်းမရနမ်းသည်။ မမမြိုင်မှာလည်း ကျော်ကျော်၏ငတ်မွတ်တဲ့ အနမ်းတွေကြောင့် သူမရဲ့လက်များက ကျော်ကကျော်ကို မရည်ရွယ်ပဲ ပြန်ဖက်ထားမိသည်။
ကျော်ကျော်ရဲ့ လက်များက မမမြိုင်ရဲ့ မို့မောက်နေတဲ့ ရင်အစုံသို့ ကျူးကျော်လာသည်။ မသေးလွန်းမကြီးလွန်းသော မမမြိုင်၏နို့လေးနှစ်လုံးကို အင်္ကျီအပေါ်မှ ပွတ်သပ်ရာမှ သူမရဲ့ အကျီင်္လေးကို အပေါ်သို့လှန်တင်ပြီး ဘော်လီအတွင်းသို့ လှမ်းနှိုက်လိုက်လေရာ အလွန်တရာမှ နူးညံ့လှသော အထိအတွေ့ကိုရရှိလေသည်။အခုတော့ မမမြိုင်တစ်ယောက် သူမမောင်တစ်ယောက်လိုသဘောထားခဲ့သော ကျော်ကျော်ရဲ့ ပြုမူသမျှကို အပေါ်ပိုင်းဗလာနှင့် လိုက်လျောရလေပြီ။ ကျော်ကျော်က လည်ပင်းကိုနမ်းနေရာမှ မမမြိုင်ရဲ့ ဖြူဥနေသောအပျိုနို့လေးကို ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်သည်။ အသားဖြူလွန်းသောမမမြိုင်ရဲ့ နို့လေးမှာ အကြောစိမ်းလေးပင်မြင်နေရသည်။ ထို့နောက် မမရဲ့ နို့သီး နီနီလေးကို စုပ်လိုက်ရာ မမမြိုင်မှာ ကော့တက်လာလေတော့သည်။
ကျော်ကျော်က နို့နှစ်လုံးကို တစ်လှည့်စီ စုပ်နေရင်း လက်ကလည်း မမမြိုင်ရဲ့ ပေါင်ကို အထက်အောက်ပွတ်ပေးနေသည်။ ကျော်ကျော်သည် တစ်ဖြည်းဖြည်း နှင့်အောက်ကို ဆင်းပြီး နမ်းရာ မမမြိုင်၏ ဗိုက်သားချပ်ချပ်လေးနားရောက်လာသည်။ ကျော်ကျော်၏အနမ်းများမှာ ထိုနေရာတွင်မဆုံးသေးပဲ ထမိန်စကို ပါးစပ်နှင့်ကိုက်ပြီး အောက်သို့ဆွဲချွတ်လိုက်လေသည်။ ထို့နောက် အတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်မှ ဖြည်းဖြည်းချင်းနမ်းလိုက်ရာ
မမမြိုင်လည်းသူမရဲ့ အဖုတ်လေးကို ကျော်ကျော်နမ်းတော့မည်ကို မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်လာကာ
" အို မောင်လေးရယ်အဲဒီနားလေးတော့မလုပ်ပါနဲ့နော် မတော်လို့ပါကွယ်"
ကျော်ကျော်က မမမြိုင်ရဲ့ တောင်းပန်စကားကို မကြားဟန်ပြုကာ အတွင်းခံလေးကို ချွတ်လိုက်ပြီး မမမြိုင်၏ အမွှေးရေးရေးနှင့် အဖုတ်လေးကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးဖြင့်နမ်းလိုက်သည်။
" အင်း အင်း " အဖုတ်နုနုလေးကို အနမ်းခံလိုက်ရသဖြင့် မမမြိုင် ညည်းသံများ အလိုလိုထွက်လာလေသည်။ အဆီများစုနေသော အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို တစ်ဖက်တစ်ချက်စီ နမ်းကာ လျှာဖြင့် အကွဲကြောင်းလေးများကိုယက်လိုက်ရာ အဖုတ်မှ အရည်များတစ်စိမ့်စိမ့်ယိုကျလာသည်။ထို့နောက် ကျော်ကျော်က အစေ့လေးကိုပါ လျှာဖြင့်ယက်လိုက်သောအခါ
"အား မောင်လေး ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲကွယ် မမအရမ်းနေရခက်နေပြီ။"
မမမြိုင်မှာ တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ် မခံစားဖူးသောအရသာကို ခံစားလိုက်ရသဖြင့် ပါးစပ်မှ ပြောမိပြောရာပြောလိုက်မိတော့သည်။ ကျော်ကျော်ကလည်း အစေ့ကို ခပ်ပျင်းပျင်း လျှာဖြင့် ယက်လိုက်ရာ မမမြိုင်သည် ခြေလက်တွေကောက်ပြီး ကျော်ကျော်ခေါင်းကို သူမရဲ့ အဖုတ်နဲ့အတင်းဆွဲကပ်ပြီး စောက်ရည်များပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့သည်။ မမမြိုင်တစ်ချီပြီးသွားလေပြီ။
ကျော်ကျော်သည် သူ့ရဲ့ခေါင်းကို မမမြိုင်၏ပေါင်ကြားမှ ခွာလိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ စံချိန်တင်လီးကြီးနဲ့ မမမြိုင်ရဲ့ အဖုတ်ကြပ်ကြပ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်ရာ
" အားနာတယ် နာတယ် မောင်လေး"
မမမြိုင်က ကြီးမားသောကျော်ကျော်ရဲ့ ဒစ်ဒါဏ်ကို မခံနိုင်ပဲထအော်လေသည်။
" မမမြိုင် ခဏပဲနာတာပါ ကြိတ်ခံလိုက်နော် ခဏနေကျရင်ကောင်းလာလိမ့်မယ်။"
ကျော်ကျော်က ပြောရင်းနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်ထည့်သည်။ လီးကလည်း ကြီး အဖုတ်ကလည်း ကြပ်ဆိုတော့ ကျော်ကျော့်မှာ လိုးခြင်းရဲ့ အရသာကို အပြည့်အ၀ခံစားနေရသည်။ အဖုတ်သားကလည်း နူးညံ့လွန်းလှသည်။ ကျော်ကျော်က လီးသုံးပုံတစ်လောက်သွင်းပြီး ဆက်မသွင်းတော့ဘဲ မမမြိုင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းပြီး လက်ကလည်း နို့နှစ်လုံးကို ဖြည်းဖြည်းခြင်းနှယ်နေရာ မမမြိုင်မှာ နာခြင်းထက် အရသာရှိခြင်းတို့ကို ပိုမိုခံစားလာရသည်။ထို့ကြောင့်
" မောင်လေးရယ် မမအရမ်းကောင်းလာပြီ။ဆက်ထည့်တော့နော်။" ဟု မရှက်မကြောက်ပြောထွက်လာသည်။ ထိုအခါကျော်ကျော်လည်းသူ့ရဲ့ လီးကြီးကို အဆုံးထိစောင့်ထိုးလိုက်ရာ
" ဖွတ်စွတ် ဗြွတ်ဗြွတ်" " အားနာလိုက်တာ မောင်လေးရယ် နည်းနည်းညှာပါဦး။" ဟူသော အသံများထွက်လာလေသည်။ သို့သော်ကျော်ကျော်မှာ သူ၏လီးအား မမမြိုင်၏ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားများ ကအရမ်း စုပ်ထားသောကြောင့် အလွန်အရသာ ရှိသဖြင့် မမမြိုင်အား အညှာတော့ဘဲ အားရပါးရတက်စောင့်လေသည်။
"မောင်လေးရေ မမသေတော့မယ် ဒီလောက်မကြမ်းပါနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်မောင်လေးရယ်"
မမမြိုင်က သနားစဖွယ်တောင်းပန်သော်လည်း ကျော်ကျော် ကားမရပ်မနားဆောင့်လေသည်။ အချက် နှစ်ဆယ်လောက်အဆောင့်ခံပြီးသော် မမမြိုင်လည်းကောင်းလာလေသည်။ ထို့ကြောင့်
"မမမြိုင်ကို မညှာနဲ့တော့ မောင်လေး ဆောင့်သာဆောင့်။ အီးအား ၇ှီး ကောင်းလိုက်တာ။"
ကျော်ကျော်ကလည်း အပေါ်က အားကုန်ဆောင့် မမမြိုင်ကလည်း အောက်ကနေညှစ်ပေးနှင့် နှစ်ယောက်စလုံး တပြိုင်တည်းပြီးသွားလေတော့သည်။ ကျော်ကျော်ရဲ့ လရည် ပျစ်ပျစ်များကလည်း မမမြိုင်ရဲ့ စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ တစ်ဟုတ်ထိုးပန်းထုတ်လိုက်လေတော့သည်။
ကျော်ကျော်က အတိတ်ကိုပြန်မြင်ယောင်နေစဉ် ညိုညိုအောင်ရဲ့ငြီးသံကြောင့် အတွေးကမ္ဘာမှ လန့်နိုးသွားသည်။
"ဟာ ဒီကောင်မလေးတော့ ဒါဏ်ရာကြောင့်ဖျားပြီထင်တယ်။"
ကျော်ကျော် ညိုညိုအောင်၏ နဖူးကိုစမ်းကြည့်ရာ ကိုယ်အပူချိန်မှာ သာမန်မျှသာဖြစ်သောကြောင့် စိတ်အေးသွားပြီး ပြန်အိပ်ရန်စိတ်ကူးစဉ် ညိုညိုအောင်သည် ပက်လက် ကလေးအိပ်နေရာမှ တစ်ဖက်သို့စောင်းအိပ်လိုက်ရာ သူမ၏အောက်ပိုင်းတွင်ပတ်ထားသော တီရှပ်မှာ ဟသွားပြီး ပေါင်တန်ရှည်ရှည်လေးများသည် ပေါင်အရင်းထိပေါ်သွားလေသည်။သူမ၏ ပေါင်ကြားမှ အတွင်းခံလေးကိုအပီဝိုးတ၀ါးဖြင့်လှမ်းမြင်လိုက်ရသည်။ လရောင်လေးမလင်းတလင်းနှင့် အလွန်လှနေသောသူမကို တွေ့လိုက်ရသောကြောင့်ကျော်ကျော်သည် စိတ်ရိုင်းများဝင်လာလေသည်။ လူသူမနီးသော ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပေါ်တွင် နှစ်ယောက်တည်းရှိနေသည်က တစ်ကြောင်း သူမရဲ့ လှပလွန်းသော ကိုယ်လုံးကြီးကို အနီးကပ်မြင်နေရသည်ကတစ်ကြောင်း အကြောင်းကြောင်းတို့ကြောင့် ကျော်ကျော်သည် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ သူမရဲ့ ကြီးမားပြီး ကားထွက်နေသော ဖင်ကြီးကို လက်ဖြင့်ပွတ်သပ်လိုက်သည်။
နူးညံ့ပြီး ဖောင်းကားနေသော ညိုညိုအောင်၏ဖင် အထိအတွေ့သည် ကျော်ကျော့်ကို အပြင်းအထန်ဆွဲဆောင်နေသည်။ ကျော်ကျော်က သူမရဲ့ဖင်ကြီးကို အသာအယာပွတ်နေရင်း အသိတရားဝင်လာလေသည်။
" အို မဖြစ်သင့်ပါဘူးလေ။ ငါယောကျာ်းပဲ စိတ်ကိုထိန်းနိုင်ရမှာပေါ့။ "
အတွေးနှင့်အတူ ကျော်ကျော်က သူ့ရဲ့လက်အစုံကို သူမဖင်ပေါ်မှ ဖယ်လိုက်စဉ် ရုတ်တရက် ကျော်ကျော်ရဲ့ လက်မောင်းတွင် ပူကနည်းဖြစ်သွားပြီး နာကျဉ်မှုကိုခံစားလိုက်ရသည်။ အကြောင်းမှာ ညိုညိုအောင်က ကျော်ကျော့်အား သူပေးထားသည့် ဓားငယ်လေးဖြင့်လှမ်းထိုးလိုက်ရာ လက်မောင်းတွင်ရှပ်ထိသွားခြင်းဖြစ်သည်။
" ဓားနဲ့ထိုးလိုက်တာလေ။ နင်ငါ့ကိုစော်ကားမလို့ မလား။ နင်ကခွေးလိုအကောင် တဏှာရူးပဲ။ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အခွင့်အရေးယူချင်တဲ့အကောင်။ နင်ဘယ်မိဘကမွေးလာတာလဲ။ မိုက်ရိုင်းအောက်တန်းကျတဲ့အကောင်"
ညိုညိုအောင်သည် ကျော်ကျော်အား ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ပြောလိုက်ရာ ကျော်ကျော်သည် အလွန်တရာဒေါသပေါက်ကွဲသွားသည်။ သူ့မှာတော့ စိတ်ရိုင်းတွေကို မနည်းထိန်းချုပ်ပြီး သူမကို စောင့်ရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးခါမှ မိဘနှင့်ချီပြီး အပြာခံလိုက်ရသဖြင့် စိတ်ရိုင်းများတဖန်ပြန်လည်ဝင်လာပြီး
" ညိုညိုနင့်ကိုချစ်လွန်းလို့ သည်းခံပြီးနေ နေတာ။အခုနင်က ငါ့ကိုစော်ကားတယ်ပေါ့။ အေးနင်ပြောတဲ့အတိုင်းငါက တဏှာရူးပဲ။ နင့်ကိုငါစော်ကားပြီး မာနကိုချိုးပြမယ်။"
ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ကျော်ကျော်သည် သူမထံမှဓားကိုလုပြီး သူမကိုသောင်ပြင်သို့တွန်းလှဲကာ မျက်နှာအနှံ့ကို တရကြမ်းနမ်းလေသည်။ ပက်လက်ဖြစ်နေသော ညိုညိုအောင်ကိုတက်ခွကာ သူမ၏ လက်နှစ်ဘက်ကို ကျော်ကျော်က သူ၏လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖမ်းချုပ်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို အငမ်းမရနမ်းသည်။ ညိုညိုအောင်က ရုန်းသော်လည်း အရမ်းဒေါသထွက်နေသော ကျော်ကျော်၏ အင်အားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပဲ သူမ၏နှုတ်ခမ်းလေးအား ကျော်ကျော်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖြင့်အားရပါးရ နမ်းခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတော့သည်။ သူမရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးအား နမ်းယုံဖြင့် အားမရသေးဘဲ ကျော်ကျော်ရဲ့ လျှာပြားကြီးက သူမရဲ့နှုတ်ခမ်းအတွင်းမဖိတ်ခေါ်ပဲဝင်ရောက်လာသည်။လျှာနှစ်ခုက ညိုညိုအောင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းအတွင်းတိုက်ပွဲဝင်နေရာ ကျော်ကျော်သည် ဖော်မပြနိုင်သောအတွေ့ထူးကြီးကို အားရပါးရခံစားနေရသည်။ကျော်ကကျော်က သူ၏လက်တစ်ဖက်ဖြင့် သူမရဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကိုဖူးပြီး ချုပ်ထားရင်း ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် သူမ၏ ရင်ဖုံးအင်္ကျီကို တစ်ချက်ထဲဆွဲလှန်လိုက်သည်။
အင်္ကျီကို ဆွဲလှန်ခြင်းခံလိုက်ရသောကြောင့် ညိုညိုအောင်၏ရင်ဘတ်မှ မို့မောက်နေသော နို့ညိုညိုနှစ်လုံးသည် ဘော်လီအဖြူလေးအောက်တွင် ရုန်းထနေတော့သည်။ ဘော်လီအဖြူလေးမှာ နို့ညိုညိုလေးနှစ်လုံး၏ နို့သီးခေါင်းများကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သော်လည်း နို့လုံးတစ်လုံး လုံးကိုမူလုံအောင်မဖုံးထားနိုင်ပေ။ ကျော်ကျော်က သူမ၏ နို့နှစ်လုံးကို အားနှင့်ညှစ်လိုက်ရာ
"အား နာတယ်။ နင်ငါ့ကို မတရားမလုပ်နဲ့နော် ကျော်ကျော် ငါနင့်ကို အုအုအု"
မာနရှင်မလေးမှာ စကားကိုပင်ဆုံးအောင်မပြောနိုင်ရှာပေ။ ကျော်ကျော်က သူမ၏ပါးစပ်ကို သူ့နှုတ်ခမ်းဖြင့်နမ်းပြီး ပိတ်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ညိုညိုအောင်မှာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ယောကျာ်းများ ရွံ့ရှာမိသူဖြစ်သောကြောင့် တစ်စိမ်းယောကျာ်းလေးများနှင့် ကင်းကင်းနေခဲ့သောသူဖြစ်ရာ ယောကျာ်းတို့၏ အထိအတွေ့ကိုလုံးဝ မခံဘူးသော အပျိုရိုင်းလေးဖြစ်သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် သူမရဲ့ နို့အစုံကို ကျော်ကျော်၏ လက်ကြမ်းဖြင့် အညှာမတာ ကိုင်တွယ်ခြင်းခံနေလေပြီ။ ထိုအသိကြောင့် သူမသည် ကြေကွဲဝမ်းနည်းလှသော်လည်း သူမ၏အောက်ပိုင်းမှာ ယားလာသလိုလို တစ်ခုခုနှင့် အထိခံချင်သိလိုဖြစ်လာသည်။ ကျော်ကျော်ကတော့ သူမရဲ့ ဘော်လီကို ချိတ်မဖြုတ်ပဲ အထက်သို့ လှန်တင်လိုက်ပြီး သူမ၏နို့နှစ်လုံးကို ကုန်းပြီး စုပ်သည်။ တစ်ဘက်ပြီးတစ်ဘက် လျှာဖြင့်ယက်သည်။ နို့သီးခေါင်းညိုညိုလေးများကိုလည်း အပြန်အလှန် စို့သည်။ နို့ဆာနေသောကလေးတစ်ယောက်ကဲ့သို့ တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင်ကိုစို့သည်။ အပျိုရိုင်းမလေး၏ နို့ကိုစုပ်ရသောအရသာ လက်ကလည်း နို့လုံးကြီးကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်နေရသောအရသာတို့ကြောင့် ညိုညိုအောင်အားချုပ်ထားသော အားများလျော့လာလေသည်။
ညိုညိုအောင်သည် ကျော်ကျော်သူမအား ချုပ်ထားသောအားလျော့လာသည်ကို အခွင့်အရေးယူပြီး လက်ကို အားကုန်ရုန်းကာ သူမအားတက်ခွထားသော ကျော်ကျော်ကို အားကုန်တွန်းလိုက်သည်။ ကျော်ကျော်သည် မမျှော်လင့်ပဲ အတွန်းခံလိုက်ရသောကြောင့် အငိုက်မိသွားပြီး သောင်ပြင်ပေါ်သို့လဲကျသွားသည်။ ကျော်ကျော်လဲကျသွားသည်နှင့် ညိုညိုအောင်သည် လဲနေရာမှ ကုန်းထကာ ထွက်ပြေးရာ တစ်လှမ်းနှစ်လှမ်းပဲ ပြေးရသေးသည် ခြေထောက်မှဒါဏ်ရာကြောင့် ဟန်ချက်ပျက်ပြီး လေးဖက်ထောက်အတိုင်းလဲကျသွားသည်။
ကျော်ကျော်လည်း လဲနေရာမှအမြန်ထပြီး ညိုညိုအောင်၏ဘောင်ဘီတိုကိုဆွဲထားလေသည်။ ညိုညိုအောင်ကလည်း လေးဘက်အထောက်လိုက်ဖြင့် ဆက်ပြီးသွားရာ ကျော်ကျော်က သူမ၏ဘောင်းဘီတိုကို ဆွဲထားသဖြင့် ဘောင်းဘီတိုကိုချွတ်လိုက်သလိုဖြစ်ကာ ညိုညိုအောင်၏ ဖင်ညိုညိုကြီးမှာ ဘွားကနည်းပေါ်လာလေသည်။ ကျော်ကျော်မှာ သူအနှစ်နှစ်အလလ လိုချင်လှသော ဖင်ကြီးကို လေးဖက်ထောက်ပုံစံဖြင့်မြင်လိုက်ရသော် စိတ်ရိုင်းများပိုမိုဝင်လာပြီး သူ၏ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး သူမကို ပက်လက်ဆွဲလှန်ကာ သူ့ရဲ့ လီးကြီးဖြင့် ထိုးထည့်လိုက်သည်။ သို့သော် ညိုညိုအောင်က အောက်နေရုန်းနေပြီး ပေါင်ကိုစိထားသောကြောင့် လီးကြီးမှာလိုရာကိုမရောက်ပဲ သူမ၏ပေါင်ကိုသာ သွားထိုးမိလေသည်။ လိုရာကိုမရောက်သဖြင့်ကျော်ကျော်စိတ်တိုသွားပြီ။ ညိုညိုအောင်ရဲ့ နို့သီးခေါင်းနှစ်ခုကို သူ၏လက်ဖြင့် ညှစ်ခြေလိုက်ရာ သူမသည်နာကျဉ်မှုကြောင့် သတိလွတ်ပြီးပေါင်ကားသွားလေသည်။
ကျော်ကျော်က အခွင့်အရေးကိုလက်လွှတ်မခံပဲ သူ့ရဲ့ စံချိန်တင်လီးကြီးကို သူမရဲ့ အပျိုစင် စောက်ဖုတ်ထဲထိုးထည့်လိုက်ရာ သူ၏နီရဲပြီး ပြဲလှန်နေသော ဒစ်တစ်ခုလုံးဝင်သွားလေသည်။
"အား အမလေး နာလိုက်တာ။ အမေရေကယ်ပါဦး သမီးတော့ အလုပ်ခံနေရြ့ပီ အီး။"
ညိုညိုအောင်မှာ သူမ၏ကြပ်ထုပ်နေသော စောက်ဖုတ်အ၀ထဲသို့ ဒစ်ဝင်လာသော ဒါဏ်ကြောင့် အော်မိအော်ရာ အော်လိုက်မိလေတော့သည်။ သူမရဲ့ အော်သံက ကျော်ကျော်ကို ပိုမိုပြီးစိတ်ကြွစေရာ ဒစ်တစ်ခုသာဝင်နေသောသူ၏လီးကို အားစိုက်ပြီးထိုးလိုက်သည်။ နူးညံ့သော စောက်ဖုတ်အတွင်းသားများက ကျော်ကျော်၏လီးကိုညှစ်ထားရာ ကျော်ကျော်သည် ကာမအရသာကို အကောင်းဆုံးခံစားနေရသည်။ညိုညိုအောင်၏ အဖုတ်ကလေးမှာ ကြပ်လွန်းလှသလို ကျော်ကျော်ရဲ့လီးမှာလည်း သာမန်ထက်ကြီးသောကြောင့် အဖုတ်ထဲသို့ အဆုံးထိ ထိုးလို့မရဖြစ်နေသည်။ ညိုညိုအောင်မှာလည်းအလွန်နာကျင်စွာခံစားရလေသည်။
လီးမှာလည်း သုံးပုံတစ်ပုံသာဝင်သေးသည်။ ကျော်ကျော်မှာ ဆက်ပြီးလိုးသော်လည်း လီးမှာ အကာအရံတစ်ခုကြောင့် ထပ်မ၀င်တော့ချေ။ကျော်ကျော်သည် သူမရဲ့ အပျိုမှေးကို သူ့လီးကြီးသွားထောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကို သဘောပေါက်လိုက်သည်။အော်အခုခေတ်ကြီးထဲမှာ ရှားရှားပါးပါးအပျိုစင်လေးပါလားဟု တွေးမိရာသူမအား အတင်းဆက်မထည့်တော့ပဲ ၀င်သလောက်လေးကို သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်နှင့် ညင်ညင်သာသာဆက်လုပ်လိုက်လေသည်။ညိုညိုအောင်မှာလည်း အလွန်နာကျဉ်နေရာမှ တစ်ဖြည်းဖြည်းသက်သာလာပြီး အဖုတ်နားမှတဆင့် ခံစားချက်တစ်မျိုးလေးက သူမတကိုယ်လုံးကိုပျံ့နှံ့လာလေသည်။သူမသည် ရုန်းကန်ခြင်းမရှိတော့ကြောင့်ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိမပြုအောင် ထိုခံစားချက်လေးတွင် မှိန်းမောနေမိတော့သည်။
ကျော်ကျော်သည် သူ့ရဲ့လီးကြီးတွင် စွတ်စိုလာပြီး စောက်ဖုတ်လေးမှာ အရင်လောက်မကြပ်တော့ကြောင်းသတိထားမိလာသည်။ထို့ကြောင့် ကျော်ကျော်သည်အားထည့်ပြီး တစ်ဆုံးလိုးထည့်လိုက်ရာ ဖောက်ကနဲ ခံစားလိုက်ရပြီး လီးမှာတစ်ဆုံးဝင်သွားလေသည်။ ညိုညိုအောင်မှာလည်း အသည်းခိုက်မတတ်နာသွားပြီး မျက်ရည်များလည်းဒလဟောစီးကျလာသည်။ဆီးစပ်နှစ်ခုမှာလည်း ကြားလေသွေးလို့မရအောင်ပင် ထိကပ်သွားလေသည်။
အပျိုမှေးလေးပေါက်သွားသည်ကို ကျော်ကျော်သိလိုက်သည်။ ထိုအသိနှင့်အတူ အပျိုစစ်စစ်လေးကို ပါကင်ဖောက်နေရပါလားဟူသောအသိကြောင့် စိတ်တွေပိုကြွလာပြီး ကျော်ကျော်က အားကုန်ဆောင့်လေသည်။ အောက်မှ ကျော်ကျော်၏အားရပါးရ လိုးခြင်းခံနေရသောညိုညိုအောင်သည် သူမ၏ကျဉ်းကျပ်လှသော အဖုတ်လေးထဲသို့ဝင်ထွက်နေသောဒစ်ဒါဏ်ကြောင့် အသက်ကိုပင်မနည်းရှူနေရရှာသည်။ အဖုတ်မှာအပျိုစစ်စစ်အဖုတ်ဖြစ်သောကြောင့် နူးညံ့ပြီး ကျော်ကျော်၏လီးကို သားရည်ကွင်းစည်းထားသကဲသို့ ကျပ်ထုတ်စွာဆွဲစုပ်ထားရာ လီတံတစ်ချောင်းလုံး ပူထူကာ အရသာရှိလှသည်။ ဆယ်ချက်ဆယ့်ငါးချက်ခန့် အားရပါးရဆောင့်ခံရပြီးသော် ညိုညိုအောင်၏ အဖုတ်နုနုမှာ အရည်များဒလဟောထွက်လာပြီး အဖုတ်မှာ အနည်းငယ်ချောင်လာသည်။ ညိုညိုအောင်မှာလည်း သူမလုံးဝသဘောမတူမကြည်ဖြူဘဲ အလိုးခံနေရသော်လည်း ခံစားချက်တစ်မျိုးက သူမရဲ့ ရုန်းကန်နေမှုများကို အနိုင်ယူလာသည်။ သူမသည် အလွန်ကြီးသော လီးကြီးဖြင့် အပျိုမှေးကို အဖြဲခံရစဉ်ကပင် နာကျဉ်မှုကို အံကြိတ်ပြီး မအော်ဖြစ်အောင် မာနဖြင့်တင်းခံနိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုခံစားချက်ကိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်အောင်ဖြစ်လာသည်။ သူမတစ်ကိုယ်လုံးရှိအကြောများက တဆပ်ဆပ်တုန်လာပြီး သူမကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ခင် ပါးစပ်မှ ညည်းသံများထွက်လာလေသည်။
သူမက မကြည်ဖြူသော်လည်း သဘာဝအရ သူမခန္ဓာကိုယ်က ကာမအရသာကိုကြေကြေနပ်နပ်ခံယူနေပြီဖြစ်သည်။
"စွပ်စွပ် ပြွတ်ပြွတ် ဖွတ်ဖွတ် ပလွတ်ပလွတ်"
" အင်းအင်း အားအားအား"
စောက်ရည်များက ဆက်တိုက်ထွက်လာသောကြောင့် စောက်ပတ်ထဲ လီးဝင်သည့်အသံများကပိုပြီးကျယ်လာသည်။ လိုးသံများကော ညိုညိုအောင်၏ ညည်းသံများကြောင့် ကျော်ကျော်ကအရမ်းကောင်းလာပြီး သူမရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကို သူ၏ပုခုံးပေါ်တင်ပြီး ဆက်တိုက်ဆောင့်ရာ လရည်များက တောင်ကျချောင်းပမာအရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ညိုညိုအောင်၏စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ တိုးဝင်သွားလေသည်။ ကျော်ကျော်လည်း အကြောပေါင်းတစ်ထောင်စိမ့်ပြီး ပါးစပ်မှပင်
ဟု ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ပြောထွက်သွားလေသည်။ ညိုညိုအောင်မှာလည်း သူမ၏စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ နွေးကနည်း နွေးကနည်း ၀င်လာသောလရည်များကြောင့်လည်းကောင်း ကျော်ကျော်ရဲ့ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်အပြောကြောင့်လည်းကောင်း လက်များခြေများ အပြင်းအထန်ကောက်ကွေးသွားပြီး ပြီးသွားလေသည်။
"ညိုညိုရေ ငါစိတ်ကိုမထိန်းနိုင်တော့လို့တောင်းပန်ပါတယ်ဟာ ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်နော်"
မာနရှင်မလေးမှာ ကျော်ကျော်၏တောင်းပန်စကားကြောင့် ပိုပြီးစိတ်တိုလာသည်။ သူမတစ်သက်လုံး ထိန်းသိမ်းလာခဲ့သော အပျိုအဖုတ်လေးကို သူ့ရဲ့ လီးမည်းမည်း ဒစ်နီနီကြီးနဲ့ မညှာမတာ လိုးတုန်းကလိုးပြီး လရည်တွေကို အားရပါးရ ထည့်ပြီးမှ စကားတစ်ခွန်းဖြင့်တောင်းပန်သောကျော်ကျော်ကို အရမ်းမုန်းပြီး
"နင် ခွေးလိုကောင် ငါ့ကိုမုဒိန်းကျင့်တဲ့ နင့်လိုကောင်ကို ဘယ်တော့မှခွင့်မလွှတ်ဘူး။ နင်ဟာ တိရစ္ဆာန်ကမွေးလာတဲ့ကောင်။ နင့်ကိုငါဘယ်တော့မှ မကြေဘူးကျော်ကျော်။"
ညိုညိုအောင်က ကျော်ကျော်ကို ပက်ပက်စက်စက်ပြောပြီးထလိုက်ရာ လေးဖက်ထောက်ပြီးလဲကျသွားသည်။ ကျော်ကျော်သည် သူ့အား တိရစ္ဆာန်ကမွေးတဲ့ကောင်ဟု အမေကိုထိပြီးအပြောခံလိုက်ရသဖြင့် ဒေါသပြန်ထွက်လာသည်။ထို့အပြင် လေးဖက်ထောက်ပုံဖြင့်သူအမြဲတမ်းလိုချင်နေသောညိုညိုအောင်၏ဖင်ညိုညိုဝိုင်းဝိုင်းကြီးကိုမြင်လိုက်ရသောအခါ လီးကြီးမှာတဖန်ထောင်မတ်လာပြီး
"ဒီလောက်မာနကြီးတဲ့ နင့်ကိုငါ အဖုတ်ကိုမကဘူး နင့်ဖင်ကိုလိုးပြီး နင့်မာနကိုငါချိုးပြမယ် ညိုညို"
ပါးစပ်ကပြောရင်း ကျော်ကျော်သည် သူမကို လေးဖက်ထောက်ပုံစံဖြင့် အနောက်မှဖိချပြီး သူ့ရဲ့လီးဖြင့် မာနရှင်မလေး၏ တင်းကား နူးညံ့သော ဖင်ကြားကိုထောက်လိုက်သည်။
သူမ၏ဖင်ကို လီးဖြင့်အထောက်ခံလိုက်ရသဖြင့် ညိုညိုအောင်လန့်သွားသည်။ ကျော်ကျော်က သူမဖင်ကို တကယ်လိုးတို့မည်ကိုသိလိုက်ရသဖြင့် ညိုညိုအောင်ကရုန်းသည်။သို့သော် မှောက်ရက်လဲနေသော သူမအပေါ်ကို ကျော်ကျော်က သူ့ကိုယ်လုံးနဲ့ ဖိထားပြီး သူမ၏လက်တစ်ဖက်ကို လက်ပြန်ခေါက်ပြီး ချုပ်ထားရာ ရုန်းလေ သူမဖင်ကြီးက တရမ်းရမ်းနှင့် ပိုပြီးကုန်းပေးသလိုဖြစ်လာလေသည်။ ကျော်ကျော်က ညိုညိုအောင်၏ ခရေပွင့်ညိုညိုလေးထဲ သူ့လီးကြီးကို ထိုးထည့်ရန်ကြိုးစားသည်။သို့သော် ဖင်ကြီးက ရမ်းနေရာ မည်သို့မှ ထိုးလို့အဆင်မပြေချေ။ ကျော်ကျော်သည် ဒေါသပိုထွက်လာပြီး သူမ၏လက်ကို အတင်းခေါက်လိုက်ကာ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် သူမဆံပင်ကို ဆွဲလိုက်သည်။
" အား အား"
လက်ကို အတင်းအလိမ်ခံလိုက်ရသည့် အပြင် ဆံပင်ပါအဆွဲခံလိုက်ရသဖြင့် ညိုညိုအောင်မှာ အရမ်းနာသွားပြီး အလန့်တကြားအော်လိုက်လေသည်။
"နင်ထပ်ပြီး ရုန်းရင် နင့်လက်ကျိုးသွားလိမ့်မယ် ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်း"
ညိုညိုအောင်သည် လက်ကျိုးသွားမည်ကို စိုးသဖြင့် မည်သို့မှ မတတ်နိုင်တော့ပဲ သူမ၏ အဖိုးတန် အပျိုစင်ဖင်ကြီးကို ငြိမ်ပေးလိုက်ရပါတော့သည်။ ကျော်ကျော်လည်း ဆံပင်ဆွဲထားသည့် လက်ကိုလွှတ်ပြီး သူ့လီးကြီးကို ကိုင်ကာ သူမ၏ ဖင်ပေါက်ထဲသို့ သေသေချာချာ ချိန်ပြီး လီးကိုတစ်ဆုံးထိုးထည့်လိုက်သည်။ ကျော်ကျော်၏လီးမှာ ကြပ်တည်းလှသော ဖင်ပေါက်ထဲသို့ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြင့် အဆုံးအထိဝင်သွားသည်။ ညိုညိုအောင်သည်ဖင်ကို မည်သည့်ချောဆီမှမပါဘဲ အစိမ်းလိုးခြင်းခံလိုက်ရသောကြောင့် အသည်းခိုက်မတတ်နာသွားပြီး အားကုန်အော်လိုက်လေသည်။ သူမ၏ဖင်ထဲသို့ ၀င်သွားသောလီးရှည်ကြီးမှာ မဆုံးနိုင်ဘူးဟုပင်ထင်ရသည်။ အပ်ါက လိုးနေသောကျော်ကျော်မှာလည်း ဖင်ပေါက်မှာ အလွန်ကြပ်သဖြင့် သူ၏လီးတံတစ်လျှောက်ပင် တော်တော်နာသွားလေသည်။
သို့သော် အပျိုမဖင်ကို လိုးနေရသော အသိကလည်း အရမ်းကို စိတ်အားထက်သန်စေသည်။ ညိုညိုအောင်မှာလည်း ဖင်အလိုးခံနေရသောသူမဘ၀ကို တွေးမိပြီး မျက်ရည်များတဖန်ပြန်ကျလာသည်။ အလိုးခံနေရင်းပင် သူမ၏ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောဖူးသောစကားများကို ပြန်ကြားယောင်လာမိသည်။
" အနောက်ပေါက်ကိုဆို တော်ယုံတန်ယုံ မိန်းမကပေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟ။ တစ်ချို့ကြေးစားမတွေတောင် မပေးလုပ်ဘူး။"
ထိုစကားကို ပြန်ကြားယောင်လာသော် ညိုညိုအောင်သည် သူမ၏ဘ၀မှာ ကြက်မလောက်တောင် အဆင့်မရှိတော့ဘူးဟု အတွေးဝင်လာကာ ၀မ်းနည်းလာလေသည်။သို့သော် အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလာသည်မှာ သူမသည် ဖင်အစိမ်းအလိုးခံရသဖြင့် အလွန်နာသော်လည်း သူမ၏အဖုတ်က တစ်ဖြည်းဖြည်း ယားလာပြီး တစ်ကိုယ်လုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့် ပူလာကာ ဖင်ခံနေရခြင်းကို နှစ်သက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
သူမသည် ကလေးဘ၀ကတည်းက မာနအရမ်းကြီးခဲ့သည်။ ထိုမာနကြောင့် မိမိကိုယ်မိမိလည်း ယုံကြည်မှုရှိလာခဲ့သည်။ မာနသည် သူမ၏လက်နက်ဖြစ်သည် သူမ၏ အားကိုးရာဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုမှာတော့ သူမ၏မာနများကော အရှက်တရားများကော တစ်သက်လုံးထိန်းသိမ်းလာခဲ့သော အပျိုဂုဏ်များမှာ ရိုက်ချိုးခံလိုက်ရပြီဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ညိုညိုအောင်၏ မာနများနေရာတွင် အစားဝင်သည်များကတော့ အရှုံးပေးလိုခြင်း ပက်ပက်စက်စက် အလိုးခံရသည့်ဘ၀ ကိုတောင့်တလာခြင်းတြို့ဖစ်သည်။
သူမ၏ အစ်မ မီမီအောင်ဘာကြောင့် အောင်ဒင်နောက်ကို လိုက်ပြေးသွားလဲဟူသောအဖြေကိုလဲ သိလာသလိုလိုဖြစ်လာသည်။ ကျော်ကျော်ကတော့ လိုးကောင်း ဆောင့်ကောင်းတုန်းဖြစ်သည်။ လီးကြီးမှာ ဖင်ပေါက်ညိုညိုထဲမှ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် နှင့် ဂွေးဥနှစ်လုံးမှာလည်း အဖုတ်ကိုတစ်ဖတ်ဖတ်ဖြင့်ရိုက်ခတ်နေလေသည်။
ကျော်ကျော်မှာ အားရပါးရဆောင့်ရင်း မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သူမ၏ဖင်ခေါင်းထဲသို့ သုတ်ရည်များကို အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့်ပန်းထုတ်လိုက်လေသည်။ ညိုညိုအောင်မှာလည်း သူမ၏ဖင်ခေါင်းအတွင်းမှ လီးကြီးတစ်ဇတ်ဇတ် တုန်သွားသည်ကိုသိလိုက်ပြီး သုတ်ရည်နွေးနွေးများ ဖင်ထဲသို့ဝင်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် သူမပါ တုန်တက်သွားပြီး ပြီးဆုံးသွားလေသည်။ ကျော်ကျော်၏လီးကြီးလည်း သူမ၏ဖင်ထဲမှ ပြွတ်ကနည်းထွက်လာကာ ကျော်ကျော်လည်း အားအင်များကုန်သွားပြီး ညိုညိုအောင်ဘေးတွင် လှဲချလိုက်လေသည်။
ညိုညိုအောင်မှာ သောင်ပြင်ပေါ်တွင် ဒူးနှစ်လုံးကို လက်ဖြင့်ပိုက်ကာ ငိုနေလေသည်။ ကျော်ကျော်မှာ လိုအင်ဆန္ဒများလည်းပြည့်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ရိုင်းများမရှိတော့ဘဲ တစ်ရှုံ့ရှုံ့ငိုနေသော ညိုညိုအောင်ကိုကြည့်ပြီး အကြီးအကျယ်နောင်တရလာတော့သည်။
"ငါငါ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာပါလိမ့်။ ငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စော်ကားမိသွားပြီ။ငါဟာ အလကားကောင်ပဲ။ဆန္ဒကိုတောင် မထိန်းနိုင်တဲ့ကောင်ပဲ။"
ကျော်ကျော်သည် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအတွက် မိမိကိုယ်ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်တော့ပဲ။ ညိုညိုအောင်အား
"ငါမှားသွားပြီ ညိုညို ရယ် နင့်ကိုငါ တောင်းပန်လဲမထူးတော့မှန်းငါသိပါတယ်ဟာ။ နင်ငါ့ကို သတ်လိုက်ပါဟာ။ နော်နင် ငါ့ကိုသတ်လိုက်ပါ။ ငါကျေကျေနပ်နပ်ကြီးအသေခံပါ့မယ်။"
ကျော်ကျော်သည် ညိုညိုအောင်၏လက်ထဲသို့ ခုဏက သူမ သူ့ကိုထိုးထားသောဓားကို ထည့်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူမသူ့အားဓားဖြင့်ထိုးမည်ကို အသင့်စောင့်နေလိုက်သည်။ သို့သော် ညိုညိုအောင်က ဓားကိုလွှင့်ပစ်လိုက်သည်။ ကျော်ကျော်က သူမလွှင့်ပစ်လိုက်သော ဓားကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး
" ဟုတ်ပါတယ်။ နင်ငါ့ကို ဘယ်ထိုးရဲမှာတုန်းလူသတ်မှုဖြစ်သွားမှာပေါ့။ ဒီတော့ နင်လည်းလူသတ်ရာမရောက်အောင် ငါလည်းငါ့အပြစ်ကို ကိုယ့်ဟာကိုဒါဏ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုပဲ ထိုးလိုက်တော့မယ်။"
ကျော်ကျော်က ပြောပြီးသည်နှင့် ဓားဖြင့် သူ့ကိုယ်သူ အားကုန်ထိုးလိုက်လေသည်။
" မောင် မလုပ်နဲ့ မလုပ်ပါနဲ့"
ညိုညိုအောင်က တအားအောင်လိုက်ပြီး ကျော်ကျော်ရဲ့လက်ကို အတင်းဆွဲထားလိုက်သည်။ ကျော်ကျော်မှာ ညိုညိုအောင်၏လုပ်ရပ်ကြောင့် အံ့အားသင့်သွားပြီး နားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားသည်။
" ညိုညို နင်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ နောက်ပြီးတော့ နင့်ငါ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလဲ။"
ညိုညိုအောင်မှာလဲ သူမကိုယ်သူမ ဘာလုပ်လိုက်မှန်းပင် မသိလိုက်ပေ။ သို့သော် သူမ၏မာနများနေရာတွင် ကျော်ကျော်အောင်ကိုအရှုံးပေးပြီး ချစ်နေမိသွားကြောင်းကို တော့သဘောပေါက်လိုက်သည်။ သူမကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ဘဲနှင့် ကျော်ကျော်အား မောင်ဟုပင်ခေါ်မိသွားပြီမဟုတ်လား။ ညိုညိုအောင်က မျက်ရည်များနှင့် ကျော်ကျော်အား သနုားစဖွယ်မော့ကြည့်ပြီး
"မောင်ရယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒုက္ခမပေးပါနဲ့တော့နော်။ ညိုညိုမောင့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ ညိုညို့ကို မောင်လုပ်ခဲ့သမျှတွေကိုလည်း ညိုညိုကြည်ဖြူသွားပါပြီကွယ်။ မောင့်ကို မောင့်ကို ညိုညို အရှုံးပေးလိုက်ပါပြီကွယ်။"
ညိုညိုရဲ့ ပြောစကားများကြောင့် ကျော်ကျော်ပါ ယောကျာ်းတန်မဲ့ မျက်ရည်များကျလာလေသည်။ အို မာနရှင်မလေးရယ် မောင်မင်းကိုချစ်လိုက်တာ။ ကျော်ကျော်သည် ညိုညိုအောင်ကို ရင်ခွင်ထဲဖက်ထားပြီး သူမ၏မျက်နှာပေါ်မှ မျက်ရည်များကို အနမ်းလေးဖြင့် ဖယ်ရှားလိုက်ပြီး
" ညိုညိုရယ်မင်းလေးကို နောင်သေတဲ့အထိ ချစ်သွားမယ်လို့ မောင်ကတိပြုပါတယ်။ မင်းကိုလည်းနောက်ဘယ်တော့မှနာကျဉ်အောင်မလုပ်တော့ဘူးလို့လဲ သစ္စာဆိုပါတယ်။"
သဲသောင်ပြင်အထက်မှာ ချစ်သူစုံတွဲ အသစ်စက်စက် တစ်တွဲပေါ်ထွက်လာသည်ကို လမင်းကြီးကတော့ ကြည်နူးစွာငုံ့ကြည့်နေလေသည်။ ကျော်ကျော်နှင့် ညိုညိုတို့ တစ်ဦးနှစ်တစ်ဦး နားလည်မှုရပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် သဘောတစ်စီး သူတို့ကျွန်းနားတွင်ဖြတ်သွားပြီး ကျော်ကျော်တို့ကို တွေ့မြင်သွားသဖြင့် သူတို့အတွဲကို ကယ်တင်ခဲ့လေသည်။